Otu esi emeziwanye njikọ ịntanetị na PS4 | Nzukọ mkpanaaka
Otu esi emeziwanye njikọ Internetntanetị na PS4
Otu n'ime egwu kachasị egwu nke ndị egwuregwu PS4 na-enwe oge na-adịghị anya n'etiti egwuregwu. N'otu oge na egwuregwu a na-achọ ka a gbagbuo anyị na, n'amaghị ma ọ bụ mara ihe merenụ, àgwà anyị anwụọla n'ala. O nweghị ohere imeghachi omume ma ọ bụ gbachitere onwe ya n'ihi na njikọ ahụ adịchaghị ngwa ngwa. Na mgbe ahụ, mgbe ezi uche iwe, anyị na-eche otu esi emeziwanye njikọ PS4.
Ọ bụrụ na nke ahụ bụ gị (ọ bụrụ na PS4 gị na-agba ọsọ ngwa ngwa) enwere ụfọdụ ihe anyị nwere ike ime iji melite ọsọ ịntanetị wee zere. ndị lags na-akpasu iwe ma ọ bụ "freezes" n'etiti egwuregwu.
Ịtụle ihe na-akpatakarị nke na-eme ngwa ngwa na nkwụsịtụ ma ọ bụ nkwụsịtụ bụ nsogbu, enwere ike ịmata ọnọdụ anọ bụ isi:
PS4 dị nwayọ mgbe ị na-eji WiFi.
Akwụsịla egwuregwu n'ime egwuregwu.
Bulite ma ọ bụ nbudata ọsọ ọsọ na PS.
PS4 lag na ime egwuregwu.
N'agbanyeghị nsogbu ahụ, anyị ga-enyocha ụzọ dị iche iche anyị nwere iji melite njikọ PS4 ma nwee obi ụtọ n'ụbọchị egwuregwu anyị na Play with fluidity and agility.
1 Banye na njikọ wired kama iji WiFi
2 Zere saturation PS4 nwere ọtụtụ nbudata
2.1 Nbudata nkeonwe
2.2 Budata mgbe ị naghị egwu
2.3 Budata na ọnọdụ ụra
3 Gbanwee DNS
4 Melite PS4 femụwe
5 Megharịa kọmputa gị (na njikọ ịntanetị)
Banye na njikọ wired kama iji WiFi
Melite njikọ ịntanetị na PS4 site na iji eriri Ethernet
Ọ bụrụ na njikọ Wifi PS4 anyị na-adị ngwa ngwa, ikekwe ị kwesịrị Tụlee ịgbanwee gaa na njikọ wired. A kpochapụwo, ma irè ngwọta.
Mgbe PS4 jikọọ na ịntanetị site na WiFi, ọ bụ ihe a na-ahụkarị na ị na-enwe obere ọsọ ọsọ. Nke a bụ n'ihi na ọ dị oke anya n'etiti console na rawụta. Ma ọ bụ na e nwere ụfọdụ ihe mgbochi n'etiti ha (nkebi, ngwá ụlọ, wdg) nke na-eme ka njikọ ahụ ghara ịda mbà.
N'aka nke ọzọ, iji njikọ wired, nsogbu ndị a niile adịghị. PS4 na-ejikọ ozugbo na modem ịntanetị gị site na eriri Ethernet, na njikọ ọ ga-adị ngwa ngwa na ntụkwasị obi. Nke a bụ ihe anyị ga-eme iji guzobe njikọ wired:
Nke mbu anyị jikọọ eriri Ethernet n'otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri LAN nke modem ahụ.
Emechaa anyị jikọọ nsọtụ ọzọ nke eriri Ethernet na ọdụ ụgbọ mmiri LAN nke PS4, nke dị n'azụ njikwa.
Ozugbo emechara nke a, ị ga-aga "Isi menu" na PlayStation 4 wee họrọ nhọrọ iji "Isetịpụ".
N'ebe ahụ ka anyị ga -ebu ụzọ họrọ "Net" na na-esonụ menu nhọrọ nke "Tụlite njikọ Ịntanetị".
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ "Jiri eriri LAN" na n'ikpeazụ họrọ nhọrọ "Mfe".
Ozugbo anyị mechara usoro ndị a, PS4 anyị ga-eme nke ọzọ: ọ ga-achọpụta eriri Ethernet wee jikọọ njikwa na ịntanetị. Nke a kwesịrị imeziwanye njikọ ịntanetị nke PS4 anyị. Anyị ga-achọpụta ya ozugbo, ozugbo anyị malitere igwu egwu.
Zere saturation PS4 nwere ọtụtụ nbudata
Ọtụtụ ịgba mgba n'otu oge nwere ike belata ọsọ nke PS4 gị
Ọ bụ ezi uche. Ọ bụrụ na anyị na-agbalị ibudata ọtụtụ egwuregwu na PlayStation 4 gị n'otu oge, njikọ ahụ ga-ata ahụhụ. Ọ ga-adị nwayọọ karịa ka ọ dị. Nke a na-eme n'ihi na anyị na-eme ka ihe dị mma okporo ụzọ, ọkpọ ọkpọ. Nke ahụ bụ ọmarịcha nkọwa nke ihe na-eme.
Ka nke a ghara ime anyị, ọ ka mma karịa download egwuregwu otu otu. N'ọnọdụ ọ bụla, ọsọ ịntanetị ga-adịkwa nwayọọ ma ọ bụrụ na anyị na-agbalị igwu egwu mgbe egwuregwu ọzọ na-ebudata n'otu oge. Ọ bụrụ na njikwa ahụ na-ebudata egwuregwu dị iche iche n'otu oge, anyị nwere ike "kpọọ ha n'ahịrị" wee kpebie nke anyị chọrọ ibu ụzọ budata. A na-eme ya dị ka nke a:
Mbụ anyị pịa na "Bọtịnụ mmalite" nke onye njikwa.
Ọzọ anyị na-aga akara ngosi "Ificationsma Ọkwa" na isi menu. Egwuregwu ndị a na-ebudata ga-apụta n'elu ndepụta ngosi.
Anyị na-ahọrọ ọdịnaya anyị chọrọ ịkwụsịtụ site n'itinye cursor n'elu ya wee pịa "X" na njikwa PS4.
N'ikpeazụ, menu ga-apụta, nke ị ga-ahọrọ naanị "Kwụsị".
Budata mgbe ị naghị egwu
Ụzọ ọzọ dị mfe iji lụso nkụda mmụọ ọgụ na-akpata bụ download egwuregwu mgbe anyị na-adịghị egwu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnụ ụtọ egwuregwu ọhụrụ na njedebe nke ụbọchị, iji zuru ike mgbe ogologo ụbọchị ọrụ gasịrị, ihe anyị ga-eme bụ itinye ya ka ọ budata ihe mbụ n'ụbọchị, tupu ịhapụ ụlọ.
Budata na ọnọdụ ụra
Aghụghọ ọzọ bara uru bụ tinye PlayStation 4 n'ime ọnọdụ ụra mgbe ị na-ebudata ọdịnaya. Nke a na-enyekwara anyị aka ịbawanye ọsọ. Iji mee nke a, ị ga-eso usoro ndị a:
Anyị na-aga na isi menu wee họrọ "Isetịpụ".
Mgbe ahụ, anyị họrọ "Ntọala nchekwa ike".
Nhọrọ ndị ọzọ ịhọrọ bụ "Tọọ ọrụ dị na ọnọdụ ụra" Ọzọkwa "Jikọọ na ịntanetị."
Ozugbo emechara nke a, anyị na-alaghachi na ihuenyo ụlọ ebe anyị họrọ "Ificationsma Ọkwa" ka ịhụ ma ọdịnaya na-ebudata. Ọ bụrụ otu a, ọ ga-apụta n'elu ndepụta yana mmanya nbudata.
Ọzọ ị ga-pịa ma jide "Bọtịnụ mmalite" na njikwa PS4.
N'ikpeazụ, anyị na-ahọrọ "Ụdị izu ike".
Hagharịa DNS iji melite njikọ ịntanetị na PS4
El Sistemu aha ngalaba (DNS) na-echekwa ndepụta nke weebụsaịtị na adreesị IP (Internet Protocol) kwekọrọ. DNS na-eme dị ka akwụkwọ adreesị maka ekwentị mkpanaaka, na-edobe ọnụọgụ adreesị IP niile ka anyị ghara ime ya.
N'ozuzu, ọ bụ onye na-eweta ọrụ ịntanetị na-ekenye anyị sava DNS ndabara na netwọk ụlọ anyị. Agbanyeghị, nkesa a abụghị nke kachasị mma iji buo adreesị ngwa ngwa ka ndị ọzọ. Dị ka ọmụmaatụ, gbanwee gaa na Google DNS Ọ nwere ike inyere anyị aka melite ọsọ nke WiFi nke PS4 anyị. Anyị na-akọwa otu esi agbanwe sava DNS gị:
Ka ịmalite anyị na-aga na isi menu wee họrọ "Isetịpụ".
Ọzọ anyị họrọ netwọk wee pịa nhọrọ nke "Tụlite njikọ Ịntanetị".
N'ebe ahụ, anyị na-ahọrọ njikọ nke anyị na-eji ugbu a, na-ahọrọ nhọrọ "Ahaziri" na n'ime ya, ụzọ "Akwụkwọ ntuziaka".
N'ihuenyo gosipụtara n'okpuru, ị ga-edozirịrị ntọala dịka akọwara ya:
Nhazi adreesị IP - akpaaka
DHCP aha nnabata - Ezipụtala
Nhazi DNS - Akwụkwọ ntuziaka
Isi DNS - 8.8.8.8
DNS nke abụọ - 8.8.4.4
Ntọala MTU - akpaaka
Ihe nkesa proxy - ejikwala ya
Ozugbo emechara ntọala ndị a, ọ ga-adị naanị ịgbanyụ PlayStation wee gbanye ya ọzọ. Mgbe ahụ, mgbe ịmalitegharịa nbudata egwuregwu ahụ, ọ ga-agba ọsọ n'ụzọ dị ngwa ngwa.
Melite PS4 femụwe
Melite njikọ PS4 site na imelite ngwa ngwa
Mgbe usoro akọwara n'elu dara, anyị ga-amalite iche na PlayStation 4 anyị na-arụ ọrụ nwayọ nwayọ n'ihi na ngwa ngwa agwụla. Firmware bụ ngwa ngwanrọ na-enye aka na ịrụ ọrụ nke ngwaike nke ọma. Ya mere, nkwalite ya ziri ezi ga-eme ka nbudata nbudata ngwa ngwa yana ezigbo ọrụ izugbe nke PS4. Usoro ime ya dị nnọọ mfe:
Anyị na-aga na mmalite menu nke PS4 wee họrọ "Isetịpụ".
Mgbe ahụ anyị ga "Nwelite ngwanrọ sistemu". Ọ bụrụ na mmelite dị, ọ ga-amalite na-akpaghị aka.
Megharịa kọmputa gị (na njikọ ịntanetị)
A na-akpọkwa ndị na-anya ụgbọ ala QoS dị ka ndị na-anya egwuregwu.
A ka nwere ihe ndị ọzọ anyị nwere ike ime, ọ bụrụgodị na ọ pụtara ịcha akpa gị ntakịrị. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-ekwe omume ịkwalite njikọ PS4 na-ebuli rawụta ahụ. Enwere ụfọdụ emebere iji kwalite egwuregwu gụnyere njirimara ọrụ (QoS), nke a makwaara dị ka "ndị na-anya egwuregwu."
Ọ dịkwa mkpa họrọ ndị na-anya ụgbọ ala nwere band 5 GHz. Nke a na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ na ntụkwasị obi WiFi karịa 2.4 GHz. Buru n'uche na ndị na-anya ụgbọ mmiri nwere ike ijikwa ụfọdụ ọsọ ọsọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị nwere atụmatụ ịntanetị na-enye ọsọ nbudata ruru 300Mbps, mana rawụta gị na-akwado naanị ọsọ ruru 100Mbps, anyị agaghị agafe ego ahụ. Ya bụ, anyị ga na-atụfu 200 Mbps nke nbudata ọsọ. Nke ahụ nwere ike ịbụ mmalite nke egwuregwu PS4 anyị na-agba ọsọ na-enweghị mmiri ọ bụla achọrọ.
N'ikpeazụ, e nwere okwu ọzọ anyị kwesịrị ịtụle: were njikọ ịntanetị dị ngwa ngwa. Karịsịa ma ọ bụrụ na enwere ọtụtụ ndị nọ n'ụlọ na-egwu egwu, na-egwu ịntanetị ma ọ bụ budata ọdịnaya n'otu oge.
Enwere ụzọ iji nyochaa ihe bụ ezigbo ọsọ ịntanetị na-erute PS4 anyị. Ndị a bụ usoro dị mfe:
Anyị na-aga "Isetịpụ".
Site n'ebe ahụ gaa na nhọrọ "Net".
N'ime ihuenyo a anyị ga-ahụ nhọrọ iji "Nnwale njikọ netwọkụ."
Nke bụ eziokwu bụ na e nwere ụfọdụ ụdị njikọ Internetntanetị nke kacha mma maka egwuregwu. Nke a bụ ihe doro anya ma dị mfe n'ihi na ha na-enye ọsọ ọsọ dị mma: Ihe atụ a ma ama: mgbe a bịara n'ịgba chaa chaa, eriri dị mma karịa eriri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Internet » Otu esi emeziwanye njikọ Internetntanetị na PS4
Otu esi agbanwe aha ma ọ bụ nick nke Fortnite
Black Friday Xiaomi: were ohere nke onyinye ndị a dị ịtụnanya